Tonizia: tafakatra 18 isan-jato ny mpizahatany, 300 tapitrisa dolara ny vola miditra amin'ny fizahan-tany
Home » Toerana fitsangatsanganana » Tonizia: tafakatra 18 isan-jato ny mpizahatany, 300 tapitrisa dolara ny vola miditra amin'ny fizahan-tany
Tonizia dia nandrakitra fiakarana 18 isan-jaton'ny fahatongavan'ireo mpizahatany tao anatin'ny efa-bolana voalohany tamin'ity taona ity, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Raha ny filazan'ny minisiteran'ny fizahantany sy asa-tanana dia mihoatra ny roa tapitrisa ny mpizahatany vahiny hatramin'ny volana janoary, ary manodidina ny 330 tapitrisa dolara amerikana ny vola miditra.
Tanjon'ny minisiteran'ny fizahantany sy ny asa-tanana ny hisarika mpizahatany sivy tapitrisa amin'ity vanim-potoana ity. Nilaza ny mpandinika fa ny tondro fandrosoana voarakitra isam-bolana dia 25 ka hatramin'ny 30 isan-jato ho an'ny tsena rehetra, indrindra ho an'ny tsena rosiana sy sinoa.
Mikasika ny fivahinianana masina any El Ghriba, Djerba, nanamafy ny manampahefana fa efa an-dàlana ny fanomanana ny hetsika izay hatao amin'ny 22-23 Mey.
Ny sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization UNWTO dia naneho ny fanohanany tanteraka ny manampahefana Toniziana tamin'ny fanatanterahana ny tanjon'izy ireo hampitombo ny isan'ny mpizahatany amin'ny taona 2019.
Ny tsenan'i Maghreb, izay maneho ny 44 isan-jaton'ny fahatongavan'ireo mpizahatany hatramin'izao, dia nahita fitomboana haingana. Nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2019, nahazo mpizahatany Alzeriana 496,000 sy Libyana 473,000 XNUMX i Tonizia.
Firenena maro no nanala ny fameperana ny dia any Tonizia sy ny faritra misy azy. Ny farany dia Espana, tamin'ity herinandro ity ary Japon tamin'ny volana martsa 2019. Noraran'ny manampahefana any amin'ireo firenena ireo ny fitsangatsanganana any Tonizia taorian'ny onjan'ny fampihorohoroana tao amin'ny Bardo National Museum ary toeram-pialan-tsasatra ao an-tanànan'i Sousse.
Boar ny fizahantany afrikaninad niarahaba an'i Tonizia ny tompon'andraikitra mba ho ohatra tsara amin'ny fahazakana amin'ny fizahan-tany.
Handeha mitanjaka na mitanjaka ve ianao?
Las Vegas dia mandray ny Fetiben'ny fizahan-tany ara-kolontsaina US-China 2019